Inkampani Yezokuphepha - Iwenza Kanjani Amaphoyisa Amakhamera Womzimba Womuntu | Izixazululo ze-OMG
Security Company - How Effects is Police Body Worn Amakhamera
Bekunesikhathi lapho emisebenzini yezokuphepha yomphakathi isebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba, kepha muva nje ngisho nezikhulu ezizimele kanye nezokuphepha kuye kwabonwa ukuthi zisebenzisa le ngxenye yezobuchwepheshe. Izinhlangano eziningi zomthetho eziqala ukubona ikhamera yomzimba njengendlela yokwakha ukuthembana komphakathi, zinikeze ubufakazi obungenakuqinisekiswa futhi buze nokuthi izikhulu ziphendule ngezenzo zazo. Manje iminyango eminingi yamaphoyisa ikwamukele lokhu futhi sekuba umthetho kwezinye izifundazwe. Eminyakeni embalwa ezayo, kuzokwamukelwa kabanzi, lokhu kukholelwa kakhulu futhi kulindeleke.
Izinkampani eziningi zokuphepha ezizimele zibonakele zithatha inqubo kepha bezilokhu zihamba kancane, kungani kunjalo? Hhayi-ke, kube nezinselelo ezinkulu kakhulu maqondana Nesidingo neMali.
Ngobuchwepheshe obusha nobusafufusa, izindleko zokuba nesikhulu esizihlomele ngamakhamera omzimba ziya ngokuya zitholakala kalula. Kepha lokhu, empeleni, akubalulekile, sibona ukuthi omphakathi bangafaka kalula imali edingekayo kuyo ngemali yesibonelelo sikahulumeni nezinye izinto ezisemthethweni kepha lokhu akunakwenzeka kakhulu kwizikhungo zokuphepha ezizimele. Futhi njengoba sazi ukuthi izindleko zokuzondla kancane kancane ziba zikhulu kunangaphambili kunokuba zikhulu kakhulu kunendleko yokuthola zona ekuqaleni. Lokhu kuba yinkinga kakhulu futhi kuletha izinselelo eziningi ikakhulukazi lapho kufanele sibhekane nokugcinwa nokulondolozwa.
Uma sibheka isizathu esiyinhloko izinkampani zokuphepha ezizimele eziqhutshwa, sibona kufana nanoma yiliphi elinye ibhizinisi lapho inhloso eyinhloko ngaso sonke isikhathi ukwenza inzuzo. Lapho abahlinzeki bezokuphepha abazimele behlala futhi bazibuze ukuthi kubaluleke kangakanani ukulethwa yikhamera egqoke umzimba, baqala ukuthola ukuthi ayilethi okuningi futhi empeleni ayiyikhokhi ibhizinisi labo (inzuzo ngobuhlakani).
Kuyaqondakala kancane kancane ukuthi amakhamera agqokwa ngumzimba angaba ithuluzi elihle kakhulu lokuqeqesha ukwenza abasebenza kwezokuphepha babe ngcono emsebenzini wabo. Kepha ngaphambi kokubanika amakhamera okufanele bawasebenzise, ​​kuzofanele kube nokuqeqeshwa okukhethekile kwalokhu kucezu lobuchwepheshe. Akwanele ukumane usinikeze noma yisiphi isikhulu bese ucela ukuthi basisebenzise, ​​kufanele kube nokuqonda kwangaphambili kanye nesethi ethile yemithetho eboshelwe ukuyisebenzisa. Lokhu kufaka phakathi isici sobumfihlo, kubaluleke kakhulu ubumfihlo abuphulwa. Izinqubomgomo ezisetshenziswayo (lapho kuziwa futhi zivaliwe) zibaluleke kakhulu yize zingazwakala zizisekelo futhi zingabalulekanga. Kubalulekile futhi ukwazisa abantu ukuthi bayaqoshwa, kubalulekile futhi ukufundisa abezokuphepha ukuthi bangayifaka kanjani futhi bayilande kanjani idatha kusuka kumakhamera. Konke lokhu kuqeqeshwa kubhekelwa kuzindleko zokufika futhi izinkampani ezizimele aziboni phuzu lokwenza lokhu, zivame ukuzwa ukuthi kuyindlela yokusebenzisa imali entweni ebaluleke kangako. Noma kungazwakala kahle, izinkampani ezizimele ikakhulukazi zinikeza ukuqeqeshwa okuqinile nokuyisisekelo okuhlanganisa izwe nezwe futhi kusho umthetho kubasebenzi bazo.
Kunamacala amaningi afakwa kwabaphathi bezokuphepha minyaka yonke, ngosizo lwamakhamera agqoke umzimba. Kulula ukuxazulula izingxabano futhi sibhekane nalawa macala ngobufakazi bevidiyo. Abaphathi bezokuphepha abazimele nabo abavikelekile kula masudi ngoba uhlobo lomsebenzi wabo luhluke kakhulu kolwesisebenzi sikahulumeni bathola icala elincane elifakwe kubo. Ngokwezibalo kuyabonakala ukuthi amaphoyisa avamise ukugcina esebenzisa amandla isikhathi esiningi. Ngokuqondene namaphoyisa angasese, ucwaningo olwenziwe alukwazanga ukukhombisa ukuthi basebenzisa amandla noma abantu. Lokhu kuyaqondakala kahle ngemuva kokuthola iqiniso lokuthi ababophi nsuku zonke noma kufanele baphenye njengoba kufanele iphoyisa lomphakathi. Ukuphepha kwangasese kunenqubomgomo “yokubamba izandla” ebavimba ukuthinta noma ngubani. Ngohlobo lwezinto ezenziwa ukuphepha kwangasese, kunzima kakhulu ukukhipha uhlobo lwamacala angaheha ukumangalelwa noma ukuboshwa okungamanga.
Ukungenela ubumfihlo bomuntu kumane kusho ukuphazamisa ilungelo lomuntu lokushiywa wedwa, izinkampani eziningi zokuphepha manje zikhathazekile neqiniso lokuthi ubufakazi obuvela kumakhamera omzimba bungenza umthwalo wabo jikelele uphakame. Kwenza la mafemu abe nomuzwa wokuthi ukuqoshwa kwawo kungahle kuthinte ubumfihlo futhi kwephule imithetho ethile endaweni ethile. Esikhathini esiningi kuba nomuzwa wokuthi ngisho nokuqoshwa ngokwakho kungaba yingozi kuleli cala, ngokwemvelo, kufanele kuchazwe ukuthi kukhulunywe noma kucace bumsulwa. Njengoba abezomthetho manje bebona izikhala njengobufakazi obungavala icala bese kufakazwa noma ngabe yini umuntu athi masinyane ngenkathi ethwala izindleko.
Abanikazi abaqinile, noma kunjalo, bayazi ukuthi abanikeli ukuqeqeshwa okwanele, ngakho-ke ngeke kumangale uma kunenkinga ikakhulukazi lapho bazi ukuthi abasebenzi babo banamakhono nekhono, baqala ukwesaba iqiniso lokuthi ukunganaki noma akulungile isenzo singatholwa futhi sifakazelwe ngisho nobufakazi babo bevidiyo. Ngenye yamaphuzu abalulekile ekusebenziseni amakhamera agqokwa ngomzimba ukuba abe ufundiswe kahle futhi wenze ngendlela, lawa amagama asemqoka kakhulu. Kodwa-ke, abaphathi bezokuphepha sebeyazi ukuthi onogada babo ngeke benze kahle njengoba bengazange baqeqesheke kahle ngalokhu. Lokhu kuvame ukuba yinkinga ekhathaza kakhulu, ikakhulukazi bacela onogada babo ukuthi babuke futhi babike kepha bangazithathi izinyathelo ngokulwa nodlame, ukuthukuthela, ukungagculiseki noma ukuphakama kwezidakamizwa umuntu ngamunye. Abanye baze bade batshele abezokuphepha ukuthi bathathe izithende zabo noma bashayele i-911 lapho kuvela isimo.
Ukuqonda ukuthi yini okudingeka yenziwe
Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukusetshenziswa kwamakhamera omzimba, lokhu ukugwema ukuthola ubunzima nomphakathi. Indima yanoma yimuphi umhlinzeki wezokuphepha ukusebenzela, insizakalo ingaba kumphakathi noma kunoma ngubani oyisebenzisayo. Kepha izikhathi eziningi, ngenxa yohlobo lwemisebenzi izibambiso zangasese ezinikezwa zinjengomlindi, insizakalo yamakhasimende noma ngisho nokuthintela okubonakalayo. Ngokuvamile asikho isidingo sokuzihlomisa ngekhamera egqoke umzimba.
Security Company - How Effects is Police Body Worn Amakhamera igcine ukuguqulwa: Okthoba 10th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3747 Ukubuka kwe-6 Namuhla